Ụwandịigbo – Page 7 – Dedicated to the promotion of Igbo language and culture. (Maka Ịkwalite Asụsụ na Omenala Igbo)
Posted May 22, 2019 May 22, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Otu kpọrọ onwe ha APGA Peopleʻs Alliance ebole gọvanọ na-achị Steeti Anambara bụ Maazị Willie Obianọ ebubo na ọ chọrọ ime ha “i were nke a i rie m ego” nʻihe gbasara ịhọpụta onyeisioche otu ndọrọndọrọ APGA. Ndị otu a were maara ya bụ gọvanọ ọkwa ka ọ gharakwa ịkpa nwa agụ aka nʻọdụ maka na ọ nwaa nke a anwaa, ya ezị ya ihe ọkụ na-eme ntị oke. Nʻozi […]
Saraki Etoole Ụmụnwaanyị Egwu Bọọlụ Super Falcons
Posted May 20, 2019 May 20, 2019 OmenkaLeave a commentPosted in Akụkọ Ụwa
Ụbọchị Satọdee gara aga ka ụmụnwaanyị egwuregwu bọọlụ Naịjirịa a kpọrọ Super Falcons jiri ọkpụ isii a sara ise were merie ndị ogbo ha ndị Cote d’Ivoire were buru iko West African Footbool Union (WAFU). Onyeisi ụlọ ukwu na-emebe iwu na Naịjirịa toro ụmụagbọghọ a maka ike ha kpara nʻasọmmpi egwuregwu ahụ. Nʻozi o sị nʻọnụ onye ndụmọdụ ya na-ahụ maka mgbasaozi bụ Maazị Yusuph Olaniyonu were zisaa, Maazị Saraki […]